ပကျရီကလီးဈ၏ ကဆြုံးစဈသညျမြား ဂုဏျပွုမိနျ့ခှနျး – Kyaw Zaw Oo's Blog
July 31, 2021 August 10, 2021 web_master
ပကျရီကလီးဈ၏ ကဆြုံးစဈသညျမြား ဂုဏျပွုမိနျ့ခှနျး
ပက်ရီကလီးစ်၏ ကျဆုံးစစ်သည်များ ဂုဏ်ပြုမိန့်ခွန်း
အရှေ့ကမ္ဘာခြမ်း အိန္ဒိယတိုက်ငယ်၌ ဗုဒ္ဓအလောင်းအလျာ သိဒ္ဓတ္ထ အား ဖွားမြင်တော်မူပြီး နှစ်ပေါင်း (၁၉၂) နှစ်အကြာ သက္ကရာဇ် ဘီစီ (၄၃၁) ခုနှစ်တွင် အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းရှိ ဂရိမြို့ပြနိုင်ငံ အေသင် ၏ နိုင်ငံရေးသမား ပယ်ရီကလီးစ် (Pericles) သည် ပီလိုပိုနီးရှန်း စစ်ပွဲတွင် လောလောလတ်လတ် ကျဆုံးသွားခဲ့သည့် အေသင်စစ်သည်တော်များသို့ ဂုဏ်ပြုစကားကို အေသင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအား ပြောကြားခဲ့ရာ – ထိုမိန့်ခွန်းသည် အနောက်ကမ္ဘာ၏ လက်ရှိအထိ အနှစ် (၂၅၀၀) ခန့် သမိုင်းတွင် သြဇာအကြီးမားဆုံး မိန့်ခွန်းဖြစ်လာလေသည်။
ပယ်ရီကလီးစ်၏ အဆိုပါ နိုင်ငံတော်အသုဘမိန့်ခွန်း (Pericles’ funeral oration) တွင် (ရန်ဘက် စပါတာနိုင်ငံနှင့်မတူ) လူ့တန်ဖိုးရှိရှိ နေထိုင်နိုင်ကြသည့် အေသင်ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ ဂုဏ်ရည်ကြံအင်များအား ခြုံငုံပြောပြချက်များပါရှိရာ – ထိုပြောကြားချက်များမှာ လာမည့် နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ငါးရာအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း တဖြည်းဖြည်းဖြစ်ထွန်းလာမည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်၏ အနှစ်သာရ အခြေခံများပမာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူစီဒိဒီးစ် (Thucydides) ကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သဖြင့် ဖတ်ရှုရသည့် အဆိုပါမိန့်ခွန်းတွင် – မိမိတို့ တိုက်ပွဲဝင်ကာကွယ်နေကြသည့် အေသင်မြို့ပြနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပယ်ရီကလီးစ် ၏ ပြောကြားချက်များအနက် အောက်ပါကောက်နှုတ်ချက်မှာ နမူနာတစ်စ ဖြစ်လေသည်။
“(အေသင်ရဲ့) အုပ်ချုပ်ရေးဟာ လူအနည်းငယ်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိတာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံသားအများရဲ့လက်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတွက် ငါတို့ကို ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလို့ ခေါ်ကြတာဖြစ်တယ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကြား အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဥပဒေအရ တူညီသောအခွင့်အရေး လူတိုင်းအတွက် ပေးထားတယ်။ ထူးချွန်သူများကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဒီစနစ်ထဲမှာ တစ်စုံတစ်ဦးဟာ ထူးချွန်ထက်မြက်တယ်ဆိုရင် အများပြည်သူဆိုင်ရာ ရာထူးတာဝန်တစ်ခုကို ထမ်းဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် အခွင့်ထူးခံများကသာ ရစေရမယ်ဆိုတဲ့ စနစ်မရှိဘူး၊ အရည်အချင်းအားဖြင့် သာလျှင် ရရှိကြမယ့် သဘောဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အနေအထားဟာ ဘယ်လောက်ပင် ညိုးနွမ်းစေကာမှု တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုရမယ့်နေရာမျိုးမှာ သူရဲ့ဆင်းရဲမှုဟာ အခက်အခဲမဖြစ်စေရဘူး။ မိမိတို့ဘ၀တူ နိုင်ငံသားတွေ ကိုယ်ကြိုက်ရာကိုယ်လုပ်ခွင့်ရှိကြတဲ့ ဒီစနစ်ထဲမှာ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရန်သူဆိုပြီး စိတ်ဆိုးမှုန်ကုတ် မနေကြဘူး၊ သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်နေခြင်း မရှိကြဘူး။”
“It is true that we are calledademocracy, for the administration is in the hands of the many and not of the few. But while there exists equal justice to all and alike in their private disputes, the claim of excellence is also recognized; and whenacitizen is in any way distinguished, he is preferred to the public service, not asamatter of privilege, but as the reward of merit. Neither is poverty an obstacle, butaman may benefit his country whatever the obscurity of his condition. There is no exclusiveness in our public life, and in our private business we are not suspicious of one another, nor angry with our neighbor if he does what he likes; we do not put on sour looks at him which, though harmless, are not pleasant.”
ဒီမိုကရေစီစနစ် (Democracy)၊ ဥပဒေရှေ့မှောက်မှာ လူတိုင်းအတွက် တန်းတူညီမျှတဲ့ တရားမျှတမှုရှိရမယ် ဆိုသော အယူအဆ (equal justice under law)၊ ကွဲပြားမှုကို လက်ခံစိတ်ရှိခြင်း (tolerance)၊ တံခါးဖွင့်ထားသော နိုင်ငံခြားရေးဝါဒ၊ စစ်မာန်ခုတ်သည့် စပါတာနှင့်မတူ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကို အားပေးသော ပညာရေးစနစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးနေသော အေသင်မြို့ပြ စသည်တို့ကို ထင်ဟပ်သော အချက်အလက်များနှင့် ပက်ရီကလီးစ် ၏ မိန့်ခွန်းသည် ခေတ်ပြိုင်အေသင်နိုင်ငံသားများသို့ သတင်းစကားပေးခဲ့သည်သာမက နောင်လာနောက်သားများ အတွက်ပါ အမွေအနှစ်အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့ပေသည်။
[လူငယ်များအတွက် နိုင်ငံရေးမှတ်စုတိုများ (၁)]
ပကျရီကလီးဈ၏ ကဆြုံးစဈသညျမြား ဂုဏျပွုမိနျ့ခှနျး
အရှကေ့မ်ဘာခွမျး အိန်ဒိယတိုကျငယျ၌ ဗုဒ်ဓအလောငျးအလြာ သိဒ်ဓတ်ထ အား ဖှားမွငျတျောမူပွီး နှဈပေါငျး (၁၉၂) နှဈအကွာ သက်ကရာဇျ ဘီစီ (၄၃၁) ခုနှဈတှငျ အနောကျကမ်ဘာခွမျးရှိ ဂရိမွို့ပွနိုငျငံ အသေငျ ၏ နိုငျငံရေးသမား ပယျရီကလီးဈ (Pericles) သညျ ပီလိုပိုနီးရှနျး စဈပှဲတှငျ လောလောလတျလတျ ကဆြုံးသှားခဲ့သညျ့ အသေငျစဈသညျတျောမြားသို့ ဂုဏျပွုစကားကို အသေငျနိုငျငံသူနိုငျငံသားမြားအား ပွောကွားခဲ့ရာ – ထိုမိနျ့ခှနျးသညျ အနောကျကမ်ဘာ၏ လကျရှိအထိ အနှဈ (၂၅၀၀) ခနျ့ သမိုငျးတှငျ သွဇာအကွီးမားဆုံး မိနျ့ခှနျးဖွဈလာလသေညျ။
ပယျရီကလီးဈ၏ အဆိုပါ နိုငျငံတျောအသုဘမိနျ့ခှနျး (Pericles’ funeral oration) တှငျ (ရနျဘကျ စပါတာနိုငျငံနှငျ့မတူ) လူ့တနျဖိုးရှိရှိ နထေိုငျနိုငျကွသညျ့ အသေငျဒီမိုကရစေီစနဈ၏ ဂုဏျရညျကွံအငျမြားအား ခွုံငုံပွောပွခကျြမြားပါရှိရာ – ထိုပွောကွားခကျြမြားမှာ လာမညျ့ နှဈပေါငျး နှဈထောငျငါးရာအတှငျး ကမ်ဘာတဈဝှမျး တဖွညျးဖွညျးဖွဈထှနျးလာမညျ့ ဒီမိုကရစေီစနဈ၏ အနှဈသာရ အခွခေံမြားပမာ ဖွဈလာခဲ့သညျ။
သူစီဒိဒီးဈ (Thucydides) ကမှတျတမျးတငျခဲ့သဖွငျ့ ဖတျရှုရသညျ့ အဆိုပါမိနျ့ခှနျးတှငျ – မိမိတို့ တိုကျပှဲဝငျကာကှယျနကွေသညျ့ အသေငျမွို့ပွနိုငျငံ၏ အုပျခြုပျပုံစနဈနှငျ့ ပတျသကျ၍ ပယျရီကလီးဈ ၏ ပွောကွားခကျြမြားအနကျ အောကျပါကောကျနှုတျခကျြမှာ နမူနာတဈစ ဖွဈလသေညျ။
“(အသေငျရဲ့) အုပျခြုပျရေးဟာ လူအနညျးငယျရဲ့ လကျထဲမှာ ရှိတာမဟုတျဘဲ နိုငျငံသားအမြားရဲ့လကျထဲမှာ ရှိတဲ့အတှကျ ငါတို့ကို ဒီမိုကရစေီနိုငျငံလို့ ချေါကွတာဖွဈတယျ။ လူပုဂ်ဂိုလျမြားရဲ့အကွား အငွငျးပှားမှုတှနေဲ့ပတျသကျလာရငျ ဥပဒအေရ တူညီသောအခှငျ့အရေး လူတိုငျးအတှကျ ပေးထားတယျ။ ထူးခြှနျသူမြားကို အသိအမှတျပွုတဲ့ ဒီစနဈထဲမှာ တဈစုံတဈဦးဟာ ထူးခြှနျထကျမွကျတယျဆိုရငျ အမြားပွညျသူဆိုငျရာ ရာထူးတာဝနျတဈခုကို ထမျးဆောငျခငျြတယျဆိုရငျ အခှငျ့ထူးခံမြားကသာ ရစရေမယျဆိုတဲ့ စနဈမရှိဘူး၊ အရညျအခငျြးအားဖွငျ့ သာလြှငျ ရရှိကွမယျ့ သဘောဖွဈတယျ။ တဈဦးတဈယောကျရဲ့ အနအေထားဟာ ဘယျလောကျပငျ ညိုးနှမျးစကောမှု တိုငျးပွညျကို အကြိုးပွုရမယျ့နရောမြိုးမှာ သူရဲ့ဆငျးရဲမှုဟာ အခကျအခဲမဖွဈစရေဘူး။ မိမိတို့ဘ၀တူ နိုငျငံသားတှေ ကိုယျကွိုကျရာကိုယျလုပျခှငျ့ရှိကွတဲ့ ဒီစနဈထဲမှာ ငါနဲ့မတူ ငါ့ရနျသူဆိုပွီး စိတျဆိုးမှုနျကုတျ မနကွေဘူး၊ သံသယနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နခွေငျး မရှိကွဘူး။”
ဒီမိုကရစေီစနဈ (Democracy)၊ ဥပဒရှေမှေ့ောကျမှာ လူတိုငျးအတှကျ တနျးတူညီမြှတဲ့ တရားမြှတမှုရှိရမယျ ဆိုသော အယူအဆ (equal justice under law)၊ ကှဲပွားမှုကို လကျခံစိတျရှိခွငျး (tolerance)၊ တံခါးဖှငျ့ထားသော နိုငျငံခွားရေးဝါဒ၊ စဈမာနျခုတျသညျ့ စပါတာနှငျ့မတူ ဘကျစုံဖှံ့ဖွိုးရေးကို အားပေးသော ပညာရေးစနဈ၊ ဖှံ့ဖွိုးနသေော အသေငျမွို့ပွ စသညျတို့ကို ထငျဟပျသော အခကျြအလကျမြားနှငျ့ ပကျရီကလီးဈ ၏ မိနျ့ခှနျးသညျ ခတျေပွိုငျအသေငျနိုငျငံသားမြားသို့ သတငျးစကားပေးခဲ့သညျသာမက နောငျလာနောကျသားမြား အတှကျပါ အမှအေနှဈအဖွဈ ကနျြရဈခဲ့ပသေညျ။
[လူငယျမြားအတှကျ နိုငျငံရေးမှတျစုတိုမြား (၁)]
Previous လညျပငျးမညှဈဖို့ မတ်ေတာရပျခံခကျြ
Next မကျခီယာဗယျလီ၏ “အရှငျမငျးသား” (The Prince)